Ibrahimovic oo weerar culus ku qaaday jiilkii ku hareereysnaa Ferguson, si uu u difaaco Paul Pogba – Gool FM
(England) 19 Maarso 2018. Xidigii hore ee kooxda Manchester United Zlatan Ibrahimovic ayaa difaacay Paul Pogba, kaasoo uu shee gay inuu noqon karo ciyaaryahanka aduunka ugu fiican ee booskiisa khadka dhexe.
Hadalka Zlatan Ibrahimovic ayaa wuxuu imaanayaa kadib dhaleeceynta kaga timid Paul Pogba jiilkii ku hareereysnaa halyeeyga Sir Alex Ferguson tan iyo 1992-kii.
“Waxaan qabaa in Pogba uu leeyahay xirfad uu ku noqon karo xidiga ugu fiican aduunka ee booskiisa, waa wiil aad u fiican, wuxuu sameeyaa tababar fiican, wuxuu dhageystaa talooyinka uu helayo”.
“Wuxuu doonayaa inuu noqdo kan ugu fiican, wuxuu doonayaa inuu guuleysto, sidoo kale wuxuu doonayaa inuu soo bandhigo qaab ciyaareed aad u fiican”.
“Pogba wuxuu ahaa ciyaaryahan ka tirsan kooxda Manchester United, kadib wuu ka dhaqaaqay, hadana markale ayuu dib ugu soo laabtay”.
“Laakiin jiilka ku hareereysan Ferguson ee ah (jiilkii tan iyo 1992) ma jecla, sababtoo ah waxay dhamaan xirfadooda kubadda cagta kasoo hoos ciyaareen Sir Alex Ferguson, sidaasi darteed waxay ahaayeen kuwa aanan hadlin hadii aan la weydiisanin inay hadlaan, balse haatan waxay ka hadlaan meel kasta, ma aqaano hadii uu u ogolaaday Ferguson inay sidaas sameeyaan”.
“Hadii aan ahaan lahaa Tababaraha cusub ee kooxda waxaan dhihi lahaa ‘Ferguson ma joogo, aniga ayaa joogo halkan si aan u qoro taariikhda iyo sheekadeyda kooxda, Ferguson wuxuu taariikh ku leeyahay kooxda, balse wuu tagay kooxdana wali waa mid sii socota”.